I-Semalt ichaza indlela yokukhipha iinkcukacha ezivela kumaphepha e-HTML kwiFayile yePaul
Kulo nqaku, siya kukuthatha kwinkqubo ukukhipha idatha kumaphepha akho e-HTML kwaye ufundise indlela yokusebenzisa ulwazi lokwakha ifayile ye-PDF. Isinyathelo sokuqala kukuqinisekisa izixhobo zokufunda kunye nolwimi oza kulusebenzisa kulo msebenzi. Kule meko, ungcono usebenzise isakhelo se-Mojolicious sasePerl.
Esi sikhokelo sifana neRuby kwiRails nangona ineempawu ezongezelelweyo ezingadlulela okulindelekileyo. Asiyi kusebenzisa esi sikhokelo ukudala iwebhusayithi entsha kodwa ukhiphe ulwazi kwikhasi elisele likhona. UMolilicious unamacandelo afanelekileyo wokuthabatha nokucwangcisa iphepha le-HTML. Kuya kuthatha imizuzu engama-30 ukufaka le sicelo kumatshini wakho.
Isigaba esisodwa: Kubalulekile ukuqonda indlela ofuna ukuyisebenzisa xa ubhala izicelo. Kwinqanaba lokuqala, kulindeleke ukuba ubhale iskripthi esincinci se-ad-hoc emva kokufumana ingcamango jikelele yento ofuna ukuyenza kwaye ube nokuqonda okucacileyo kwinjongo yakho yokugqibela. Qaphela ukuba le khowudi yomgca kufuneka ichaneke ngaphandle kwenkqubo okanye i-subroutines.
Isigaba sesibini: Ngoku uqonda ngokucacileyo ulwalathiso olufunekayo ukuba uthathe kwaye amathala eencwadi asebenzise. Yisihlandlo "sokulwa nokulawula"! Ukuba uqokelele iikhowudi ezenza ngokufanayo izinto ezifanayo, zihlukanise zibe zingqungquthela. Inzuzo yenkcazo ye-subroutine yinto yokuba unokwenza utshintsho oluninzi ngaphandle kokuchaphazela ezinye iikhowudi. Kuya kubonelela nokufunda kakuhle.
Isigaba sesithathu: Eli nqanaba likuvumela ukuba ufake iikhowudi zakho. Unokusebenzisa izicatshulwa zekhowudi ngokulula emva kokufumana amava afanelekileyo. Ngoku, unganqumla kwi-coding kwinkqubo ukuxhomekeka kuyo-ngokukodwa xa usebenzisa ulwimi olujoliswe kuyo. Nabani na osebenzisa uhlobo olulwimi loluncedo angahlula izicelo kwiipakethi okanye / kunye 'kunye nezixhobo'. Kutheni kufuneka usebenzise le ndlela xa ucwangciso? Oku kungenxa yokuba ufuna "indawo yokuphefumla" ngakumbi ukuba ubhala isicelo esiyinkimbinkimbi.
Emva kweengcamango, ixesha lokunyuka kwinkqubo yangoku. Nazi iimanyathelo ofuna ukuzenza ngelixa uzalisekisa i-web scrubber:
Yenza uludwe lwe-URL lwamanqaku ongathanda ukuwaqokelela;
Khupha phezu kweluhlu lwakho uze ulandele le URL ngeyodwa emva komnye;
Phuma umxholo wakho we-HTML element;
Gcina iziphumo zakho kwifayile ye-HTML;
Qalisa ifayile ye-pdf kwiifayile zakho emva kokuba zonke zilungele;
Yonke into ilula njenge-ABC! Landa nje ukukhuphela kwiprogram ye-scrubber, kwaye uza kuba ulungele umsebenzi.